कोरोना: भारतबाट नेपाल आउँनेको हुँदैन स्वास्थ्य जाँच « Drishti News – Nepalese News Portal
कोरोना: भारतबाट नेपाल आउँनेको हुँदैन स्वास्थ्य जाँच
काठमाडौं । भारतमा कोरोना भाइरस तीव्ररुपमा फैलिंदा नेपालमा त्रास सुरु भएको छ । खुल्ला सीमाका कारण भारतबाट सहजै नेपाल प्रवेश गर्नेहरु बढ्दा सीमावर्ती क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको छ ।
नाकामा स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा भारतबाट फर्किएका नेपाली सिधै घर पुग्दा संक्रमणले भयावह रूप लिने जोखिम बढेको छ ।
होली मनाउन गत चैत १४ मा भारतको हैदराबादबाट बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–९ छातापिपरा घर फर्किएका ३७ वर्षीय युवकको मंगलबार बिहान नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भयो । ज्वरो र रुघाखोकी आएपछि चैत २६ मा उनी वीरगन्जको एडभान्स मेडिकेयर भर्ना भएका थिए ।
संक्रमण पुष्टि भएपछि चैत ३० को मध्यरात उनलाई नारायणी अस्पताल लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको अस्पतालका कोभिड कोअर्डिनेटर डा. सरोज रोशन दासले बताए ।
नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. नीरजकुमार सिंहका अनुसार संक्रमितमा निमोनियाबाहेक कडा खालको झाडापखालासमेत देखिएको छ । पछिल्लो एक साताको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने नयाँ स्ट्रेनको सामुदायिक संक्रमण सुरु भइसकेको छ ।
‘भयावह अवस्था रोक्न राजनीतिक कार्यक्रम, पार्टी प्रवेश, कार्यकर्ता प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रममा अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्य विज्ञ भारतबाट आएकालाई कम्तीमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, नाकामा भने तापक्रम मात्र जाँचेर अभिलेख नै नराखी प्रवेश गर्न दिइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
कोरोनाबाट बाँकेमा थप १० जनाको मृत्यु
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कराण बाँकेका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत १० जना कोरोनाको मृत्यु भएको छ
अमेरिकाको सिनेटमा नेपालको कोरोना भाइरसको असरबारे छलफल
वासिंगटन डिसी । अमेरिकी सिनेटअन्तर्गतको वैदेशिक मामिला समितिमा बुधबार नेपालमा कोरोना भाइरसले पारेको असरका बारेमा
खोप र स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्न चीनलाई अपील
काठमाडौं । नेपाली नागरिकका प्रतिनिधिहरुले छिमेकी मुलुक चीनलाई सहयोग गर्न अपील गरेका छन् । कोरोना
भरतपुर अस्पतालमा शय्या थपियो, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव
चितवन । भरतपुर अस्पतालले कोभिड उपचारका लागि शय्या थप गरेपछि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुने भएको